Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Odeeffannoo Galmee caancala jedhu filadhu
Galmee HTML dirreewwan OdeeffannooGalmee of keessaa qabaan yammuu alaaguu fi alerguu, dhangiiwwan LibreOffice addaa sifayyadda.
Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi itti uumamee saaga.
Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi dhuma maxxanfama maayii saaga.
Maqaa barreessaa, guyyaa, yk yeroo galmichi dhumaa olkaa'ame galcha.
Lakkoofsa fooyyii kan galmee ammaa saaga.
Galmee tokko gulaaluuf yeroo hamammii akka siti fudhatu saaga.
Akaakuuwwan dirree "Uumamaa", "Fooyyefamaa" fi "Dhuma maxxanfame" jedhamaniif, barreessaa, guyyaa fi yeroo qixa dalagaa gegeefametti dabaluu nidandeessa.
Dirricha akka qabiiyyee dhaabataa, jechuunis, akka foyyaa'u hindandeenyetti saaga.
Dirreewwan qaabiiyyee dhaabataa qabaan yeroo ati galmee haaraa, qajojii isa dirree akkasii of keessaa qabu irraa, uumtu qofa madaalamu. Fakkeenyaaf, dirreen guyyaa qabiiyyee dhaabataa qabu tokko, guyyaa isa galmee haaraan tokko qajojicha irraa uumame saaga.
Title is: Odeeffannoo Galmee